नारेश्व जाने सडकको बेहाल, खोला होकी सडक ! - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १ भाद्र २०७८, मंगलवार २०:३२
आषिशकुमार भट्ट: गोरखा सदरमुकाम देखि नारेश्वर जाने सडक हिलाम्य छ । सडक हेर्दा लाग्छ त्यो सडक हो वा खहरे खोला ! सडकमा साना सवारी साधन गुड्न सक्दैनन् । पैदल यात्रीलाई पनि हिलाम्य हुँदै हिड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
धमाधम स्तरोन्नतीको काम हुनुपर्ने उक्त सडकमा एक महिना यता कामदार नै देखिँदैनन् । निर्माण ब्यवशायी महासंघका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका भट्टबाट अन्य ब्यवशायीले छिटो र गुणस्तरीय काम गर्न सिक्नुपर्नेमा गृहजिल्लामा उनी जिम्मा लिएको काम अलपत्र छाड्ने, ढिलो गर्नेमा परिचित छन् ।
पूर्वाधार कार्यालय गोरखाले २०७६ फागुन १४ गते रौताहापि.के/गोरखा जेभिलाई दुई वर्षमा निर्माण सक्ने गरि २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो ।
१० किलोमिटर लामो गैरीकुवा-नारेश्वर सडक खण्ड पक्कि नाली सहित प्रिमिक्स कार्पेट प्रविधि बाट कालोपत्रे गर्ने सम्झौता भएको हो ।
बाटो गाडीहरु चल्न मिल्ने सम्म बनाउनु पर्ने हो तर मान्छे हिड्न पनि मुस्किल अवस्थामा रहेको छ । आपतकालिन समयमा एम्बुलेन्ससम्म पनि चलाउन उक्त बाटोमा सम्भव छैन ।